रिहा भएको २४ घण्टा नबित्दै महरालाई अदालतबाट आयो यस्तो खुसीको खबर, सांसदहरु समेत तिनछक — Sanchar Kendra
१नयाँ सरकार बनेपछि प्रचण्डले भनेका थिए- कार्यकारी निर्देशकमा कुलमानलाई ल्याउनुपर्छ
२मन्त्रिपरिषद बैठकले गर्यो यस्ता ८ निर्णय
३विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक शाक्यलाई बालुवाटार बोलाईयो, यस्तो छ देउवा सरकारको तयारी
४उपत्यकामा मात्रै ९०४ जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि
५देउवा सरकारद्वारा भूमिसम्बन्धी आयोग खारेज
६थप ३३८३ जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि, २४ को मृत्यु
७काठमाडौं उपत्यकामा फेरि लम्ब्याइयो निषेधाज्ञा
८कुलमान घिसिङलाई विद्युत प्राधिकरणमा ल्याउने देउवाको तयारी
९लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पोखरेलविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ता
१०अन्तत: डा. जागेश्वर गौतमको सरुवा सदर, उनको ठाउँमा कसलाई ल्याइयो ?
११प्रधानमन्त्री देउवाले बोलाए मन्त्रिपरिषद् बैठक
१२काठमाडौँमा भेरोसेल खोप दोस्रो मात्रा साउन २२ गतेदेखि दिइने
रिहा भएको २४ घण्टा नबित्दै महरालाई अदालतबाट आयो यस्तो खुसीको खबर, सांसदहरु समेत तिनछक
काठमाडौं । रिहा भएको २४ घण्टा नबित्दै पूर्व सभामुख कृष्णबहादुर महरालाई अदालतबाट अर्को राहत मिलेको छ । पूर्व सभामुख महराले बला’त्कार प्रयास मुद्दामा सफाइ पाएको विषय संसदमा जानकारी गराइएको छ । यससँगै महराले सांसदको रुपमा संसदका बैठकमा सहभागी हुने तथा कार्य गर्ने बाटो खुलेको छ । सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले प्रतिनिधि सभाका सदस्य महराले जबर’जस्ती कर’णी उद्योगको मुद्दाबाट सफाइ पाई थुनामुक्त भएको व्यहोरा जानकारी गराए ।
मंगलबार बसेको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा महरा थुनामुक्त भएको जानकारी गराउँदै सभामुख सापकोटाले भने– ‘महानगरीय प्रहरी बृत्त नयाँ बानेश्वरको मिति २०७६/०६/१९ गतेको पत्रबाट जबर’जस्ती कर’णी उद्योग मुद्दाको अनुसन्धानको शिलशिलामा काठमाडौं जिल्ला अदालतको अनुमतिबाट कारागार कार्यालय डिल्लीबजार काठमाडौंमा थुनामा रहनुभएका प्रतिनिधिसभाका माननीय सदस्य श्री कृष्णबहादुर महरालाई काठमाडौं जिल्ला अदालतको मिति २०७६/११/०५ गतेको फैसलाले अभियोग मागदाबीबाट सफाइ पाउने ठहर गरी २०७६/११/०५ गते थुनामुक्त हुनुभएको व्यहोरा जानकारी गराउँछु ।’
प्रतिनिधि सभाका तत्कालीन सभामुख महरा संघीय संसद सचिवालयमा कार्यरत महिला कर्मचारीमाथि जबर’जस्ती कर’णी प्रयास गरेको अभियोगमा गत असोज १९ गते पक्राउ परेका थिए । काठमाडौं जिल्ला अदालतको आदेशानुसार मुद्दाको पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेका महराले सोमबार अभियोगबाट सफाइ पाएका हुन् । काठमाडौं जिल्ला अदालतका न्यायाधीश अम्बरराज पौडेलको इजलाशले अभियोगको दाबी नपुग्ने ठहर गर्दै महरालाई सफाइ दिएको हो ।
जेलमुक्त भएलगत्तै महराले निकाले यस्तो विज्ञप्ति, क कसलाई के के भने ?
ब’ला’त्कार प्रयास (ज’र’ज’स्ती कर’णी उद्योग)को मु’द्दामा सफाइ पाएसँगै आजै डिल्लीबजार कारागारबाट रिहाइ भएका निवर्तमान सभामुख कृष्णबहादुर महराले यो अवधिमा सहयोग पुर्‍याउने सबैमा धन्यवाद ज्ञापन गरेका छन् ।
उनले सोमबार अपराह्न एक विज्ञप्ति जारी गर्दै आफूमाथि लगाइएको आरोप गलत सावित भएको र सम्मानित अदालतले निर्दोष ठहर गर्दै सफाइ दिएकोमा धन्यवाद ज्ञापन गरेका हुन् । उनले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘म सम्मानित अदालतप्रति विशेष आभार एवं धन्यवाद व्यक्त गर्दछु।’ उनले यस क्रममा सक्रियतापूर्वक पहल र सहयोग गर्ने मेरो परिवारका सम्पूर्ण सदस्यहरु, मित्रहरु, मेरो पक्षमा वकालत गर्ने कानुन व्यवसायीहरु र राजनीतिक व्यक्तित्वहरुप्रति समेत हार्दिक आभार प्रकट गरेका छन् ।
विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘म ३० दिन प्रहरी हिरासत र १०३ दिन डिल्लीबजार कारागारमा बसी तथाकथित आरोप खेपेको छु। यस अवधिमा मलाई सद्भाव र सहानुभूति दिनुहुने मेरा समर्थकहरु, शुभचिन्तकहरु, अस्पतालका स्वास्थ्यकर्मी र कर्मचारी मित्रहरु, प्रहरी मित्रहरु र डिल्लीबजार कारागारका सम्पूर्ण बन्दी साथीहरुलाई हार्दिक आभारसहित धन्यवाद दिन चाहन्छु।’
महराले आफूलाई तथाकथित आरोप लगाएको भन्दै आगामी दिनमा सक्रिय राजनीतिमा रहने संकेत गरेका छन् । सफाइ पाएको जानकारी संसद सचिवालयलाई भएपछि उनको निलम्बनमा परेको प्रतिनिधिसभा सदस्य पद पनि फुकुवा हुनेछ ।
प्रतिनिधिसभा सदस्यका हैसियतमा जारी महराले विज्ञप्तिको अन्तिममा लेखेका छन्,’एक देशभक्त नेपालीका रूपमा मुलुकको स्वाधीनताको रक्षा मेरो पहिलो र उच्च प्राथमिकतामा सधैं थियो, अहिले पनि छ र सदैव रहिरहनेछ । नेपालको राष्ट्रिय स्वाधीनता र नेपाली जनताको स्वतन्त्रता इतिहासदेखि नै गौरवपूर्ण रहेको छ र सधैं रहिरहनेछ ।’
‘उनी (महरा) कोठामा नगएको भन्ने तथ्य जाहेरवाला (रोशनी) ले बयानका क्रममा पुष्टि गरिदिएकोले अभियोग दाबी बमोजिम प्रतिवादी कृष्णबहादुर महरालाई सफाइ पाउने ठहर गर्छ’ अदालतले फैसलामा उक्त कुरा उल्लेख गर्दै महराका वकिल मुरारी सापकोटाले भने। अदालतबाट सफाइ पाएलगत्तै महरा डिल्लीबजारस्थित कारागार पुगेका छन्। अदालतले सफाइ दिएको भन्ने औपचारिक पत्र पाएपछि कारागारले महरालाई थुनामुक्त गर्ने जनाएको छ।
गत असोज १२ गते राति महरा र’क्सी सेवन गरी कोठामा आएको र बला’त्कार प्रयास गरेको रोशनीले त्यसबेला भिडियोमा भनेकी थिइन्। उक्त भिडिओमा आफूमाथि महराले बला’त्कार प्रयास गरेको र नमान्दा कुट’पिट गरेको शाहीले भनेकी थिइन्। सरकारी वकिल कार्यालयले अदालतमा बुझाएको अभियोगपत्रमा सबभन्दा बलियो प्रमाण घटनाकै रात शाहीको कोठामा पुगेर प्रहरीले लिएको भिडिओ रेकर्डलाई देखिन्थ्यो।
‘प्रहरीलाई भनिदिन्छु’ भनेपछि महरा हतारहतार निस्किएको शाहीले भोलिपल्ट (गत असोज १३ गते) पत्रकार अजयबाबु सिवाकोटीसँगको भिडिओ अन्तर्वार्तामा पनि बताएकी थिइन्। त्यसरी हतारहतार महरा निस्किँदा कोठामै छुटेका जुत्ताको तलुवा, फुटेको चस्माको एउटा सिसा र भाँचिएको चस्माको खुट्टा प्रहरीले बरामद गरेको थियो।
उक्त सिसाको पावर र महराले लगाएको चस्माको पावर एउटै भएको जाँचबाट देखिएको थियो। यो महरा विरूद्धको दोस्रो ठूलो प्रमाणका रूपमा हेरिएको थियो। यस्तै महराका अंगरक्षकले पनि आफूहरू बाहिर बसेको र महरा रोशनीको कोठाभित्र गएको लिखित बयान प्रहरीलाई दिएका थिए। उक्त लिखित कागज पनि प्रहरीले अदालतमा प्रमाणको रूपमा प्रस्तुत गरेको थियो।
तिनै प्रमाणलाई आधार मान्दै पाटन उच्च अदालतले पनि महराले आफूलाई थुनामुक्त गरिपाउँ भन्दै दिएको निवेदन खारेज गरिदिएको थियो। काठमाडौं जिल्ला अदालतले महरालाई मुद्दाको अन्तिम फैसला नहुञ्जेल थुनामै राख्न दिएको आदेशविरूद्ध महरा पाटन उच्च अदालत गएका थिए।
महराले आफूमाथि बला’त्कार प्रयास गरेको र कुट’पिट गरेको भन्दै रोशनीले प्रहरीमा उजुरी दिएपछि उनलाई शिक्षण अस्पताल महाराजगञ्ज लगेर प्रहरीले स्वास्थ्य परीक्षण गराएको थियो। उक्त रिपोर्टले रोशनीमाथि कु’टपिट भएको पुष्टि गरेको थियो। पछि अदालत गएर भने रोशनीले आफ्नो कोठामा महरा नआएको लिखित बयान दिएकी थिइन्।
पूर्वसभामुख कृष्णबहादुर महरा डिल्लीबजार कारागारबाट छुट्दा उनको स्वागतमा पुगेका सत्तारूढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेकपाका कार्यकर्ताले एमसिसीविरुद्ध नारा लगाएका छन्। सोमबार अपरान्ह महरा कारागारबाट छुटेपछि कार्यकर्ताले ‘एमसिसी मुर्दावाद’ भन्दै नारा लगाए।
महरा राजनीतिको दोस्रो इनिङ, पार्टीमा फर्किन्छन कि फर्किदैनन ? के भन्छन नेकपा नेताहरू
सभामुख पदमा रहेका बेला संसद् सचिवालयमा कार्यरत कर्मचारीमाथि बला’त्कार प्रयासजस्तो गम्भीर आरोप खेपेर पद गुमाएका कृष्णबहादुर महरा सरकारी निवासबाटै पक्राउ परे । पक्राउ परेको १३३ दिनपछि उनले अदालतबाट राहत पाएका छन् । जयसिंह महराले कान्तिपुर दैनिमा समाचार लेखेका छन् ।
काठमाडौं जिल्ला अदालतले उनलाई सोमबार उक्त आरोपमा सफाइ दिएको छ। १० वर्षे सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा तत्कालीन माओवादीका शीर्ष मध्येका नेता थिए महरा। माओवादी र तत्कालीन सरकारबीच भएका वार्तामा विद्रोही पक्षका एक प्रमुख वार्ताकार थिए महरा। विद्रोही माओवादीका तर्फबाट वार्ता टोलीको सदस्यदेखि संयोजकसम्मको भूमिका निभाएका थिए।
माओवादी विद्रोहलाई शान्ति प्रक्रियामा अवतरण गराउन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेका महरा नेपाली राजनीतिको संक्रमणकाल (२०६३-०७४) मा पटक पटक मन्त्री बने। उपप्रधान तथा गृहमन्त्री, उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री, सूचना तथा सञ्‍चारमन्त्री, परराष्ट्रमन्त्री बनेका उनी माओवादीमा लाभको पद पाउने नेतामा एक नम्बरमै पर्थे।
राजनीतिक उचाइ छुने क्रममा महरा तत्कालीन एकीकृत नेकपा माओवादीको महासचिवसम्म बनेका थिए। उनी तत्कालीन माओवादी पार्टीमा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालपछिका शक्तिशाली व्यक्तिका रूपमा लिइन्थे।
सत्ता र पार्टी राजनीतिमा महराले प्राप्त गर्न प्रधानमन्त्री र पार्टी अध्यक्ष बाँकी थियो। भद्र देखिने उनलाई सबैलाई मिलाएर लैजाने क्षमता भएको नेता मानिन्थ्यो। र, यी दुवै मोर्चामा नेतृत्वका दाबेदारका रूपमा उनलाई हेरिएको थियो।
२०४८ सालमै सांसदका रूपमा महरा सिंहदरबार प्रवेश गरिसकेका थिए। त्यसपछि उनी २०६३, २०६४, २०७० र २०७४ मा सांसद निर्वाचित भए। पाँच पटक सांसद बनेका उनले संसदीय मोर्चाको शीर्ष पदमा पुगेका बेला बलात्कार प्रयासको आरोप खेप्नुपर्‍यो। जसले पार्टी र संसदीय मोर्चामा उनले जीवनभर आर्जन गरेको राजनीतिक पुँजीमा पहिरो ल्यायो।
यसरी पाए महराले सफाइ
महराले जिल्ला अदालतबाट सफाइ पाए पनि बला’त्कार प्रयासजस्तो गम्भीर आरोप खेपेपछि नैतिक धरातल निकै कमजोर बनेको छ। जिल्ला अदालतबाट सफाइ पाएका महराविरुद्ध सरकारी पक्ष उच्च अदालत जान पनि सक्छ। जिल्ला अदालत काठमाडौंले सफाइको फैसलाको पूर्ण पाठ आएलगत्तै काठमाडौं जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय महराविरुद्ध उच्च अदालत जाने/नजाने निर्णय गर्नेछ।
जिल्ला अदालतको फैसला चित्त नबुझेमा सरकारी वकिलको कार्यालय उच्च अदालतमा पुनरावेदनका लागि जान सक्‍नेछ। त्यसैले, यो मुद्दाले महराको कानुनी रूपमा पिछा छोडिसकेको छैन। यता सफाइ पाएसँगै संसद प्रवेश गर्न महरालाई बाटो खुलेको छ।
निलम्बनमा परेको उनको सांसद पद फुकुवा भएको छ। जिल्ला अदालत काठमाडौंबाट राहत पाएका महराको मुद्दालाई कानुनीभन्दा पनि नैतिक रूपमा लिनुपर्ने प्रतिक्रिया आइरहेका छन्। योसँगै उनी नेपालको राजनीतिक दृश्यमा कहाँनेर देखा पर्लान् भन्ने चासो पनि बढ्न थालेको छ।
महरा सभामुख नहुन्जेल माओवादीका नेता थिए। पार्टीको जिम्मेवारी त्यागेर उनी २०७४ सालमा सभामुख बने। यता उनको पार्टी तत्कालीन नेकपा एमालेसँग एकता गरेर नेकपा बनेको छ। अब उनी नेकपामा कस्तो भूमिका पाउलान् त भन्ने प्रश्‍न पनि उठ्न थालेको छ।
त्यसो त महरालाई नेकपाले सभामुखसँगै सांसदबाट पनि राजीनामा दिन भनेको थियो। नेकपा सचिवालय बैठकले बलात्कार प्रयासको आरोप लागेपछि महरालाई सभामुख र सांसदबाट राजीनामा दिन सुझाव दिएको थियो। सभामुखबाट राजीनामा दिएर आफूमाथि लागेको आरोपको न्यायिक रूपमा सामना गरेका उनलाई नेकपाले कस्तो स्थान देला त भनेर जिज्ञासा राख्‍ने नेकपाभित्रै छन्।
कारागारबाट निस्किएपछि महराले भने- ‘बाँकी कुरा पछि भन्छु’
महराको विषय माघ महिनामा बसेको केन्द्रीय कमिटी बैठकमा पनि उठेको थियो। नेकपाका पूर्वमाओवादी तर्फका केही केन्द्रीय सदस्यहरूले महरालाई ‘फसाइएको’ भएकाले पार्टीले त्यसबारे बोल्नुपर्ने बताएका थिए।
महराविरुद्धको मुद्दाको अन्तिम सुनुवाइ सकिएको दिन आइतबार नेकपाका केही केन्द्रीय सदस्य र विभिन्न प्रदेशका सांसद अदालतमा पुगेरै ढाडस दिइरहेका थिए। फैसला आएको दिन सोमबार संघीय सांसद धर्मशीला चापागाईंलगायत अदालत र डिल्लीबजार कारागार पुगेका थिए।
अर्कोतिर नेकपाकी सचेतक शान्ता चौधरीले अब विगतको भन्दा झन् सक्रिय भएर राजनीतिमा महरालाई देख्न चाहेको फेसबुकमा लेखेकी छन्। ‘कृष्णबहादुर महरालाई अदालतले सफाइ दिएको छ। यो पाँच महिनाको अवधिमा उहाँ र उहाँको परिवारले पाएको मानसिक यातना र मुलुकले भोग्नुपरेको पीडा असहनीय छ। न्यायालयले फैसला दिइसकेको छ,’ उनले लेखेकी छन्, ‘अब उहाँ तथा उहाँको परिवार पूर्ववत् अवस्थामा फर्कनेछ। राजनीतिमा महरा कमरेड पहिलेभन्दा सक्रिय बन्नुहुनेछ भन्ने विश्‍वास लिएकी छु।’
नेकपा स्थायी कमिटी सदस्य बेदुराम भुसालले अदालतबाट सफाइ पाएका महरालाई कस्तो भूमिका दिने भन्नेबारेमा पार्टीका विभिन्न तहमा छलफल हुने बताए। उनले भने, ‘उहाँ सांसदका रूपमा काम गर्नुहुन्छ। पार्टीमा कस्तो जिम्मेवारी दिने भन्नेबारेमा छलफल होला।’ एक आरोप खेपेर अदालतबाट सफाइ पाएका नेतालाई पार्टीमा भूमिका दिनुपर्ने प्रश्न उठ्ने उनले बताए। ‘सफाइ पाइसकेपछि भूमिका दिनुपर्छ भन्ने कुरा त उठ्छन्,’ उनले भने।
अदालतबाट सफाइ पाएर डिल्लीबजार कारागारबाट खुमलटारस्थित डेरामा पुगेपछि महराले सोमबार नै विज्ञप्ति जारी गरेका छन्। उनले विज्ञप्तिमा ‘तथाकथित’ आरोप लगाएकोमा अदालतबाट सफाइ पाएको र आफू राष्ट्र, राष्ट्रियताका पक्षमा सधैँ लागिरहने’ लेखेका छन्। प्रतिनिधिसभा सदस्यका हैसियतमा जारी गरिएको विज्ञप्तिमा उनले राजनीतिमा फर्किने स्पष्ट सङ्केत गरेका छन्।
‘एक देशभक्त नेपालीका रूपमा मुलुकको स्वाधीनताको रक्षा मेरो पहिलो र उच्च प्राथमिकतामा सधैँ थियो, अहिले पनि छ र सदैव रहिरहनेछ। नेपालको राष्ट्रिय स्वाधीनता र नेपाली जनताको स्वतन्त्रता इतिहासदेखि नै गौरवपूर्ण रहेको छ र सधैँ रहिरहनेछ,’ उनले लेखेका छन्। नेकपा स्थायी कमिटी सदस्य मणि थापाले भने महराको राजनीति अदालतको फैसलासँगै सुरक्षित भएको बताए।
‘अदालतले सफाइ दिएपछि उहाँको राजनीति सुरक्षित भयो। अन्यथा आरोप लगाउने र शङ्का गर्ने कुरा रहेन,’ सांसदको रूपमा हाल भूमिका रहने भन्ने नेता भुसालको भनाइमा सही थप्दै थापाले भने, ‘संगठनात्मक रूपमा उहाँलाई कस्तो भूमिका दिने भन्ने कुरा अहिले नै त भन्न सकिन्न, तर उहाँको पार्टीमा जुन योगदान छ त्यसलाई पार्टीको सङ्गठनात्मक क्षेत्रमा उचित स्थान दिएर जानुपर्ने स्थिति आउँछ।’
महरा सक्रिय पार्टी राजनीतिमा आउनुपर्ने र पार्टीले पनि भूमिका दिनुपर्ने थापाको भनाइ छ। महराको आगामी राजनीतिक भूमिका सरकारी पक्ष उनीविरुद्ध मुद्दा लिएर उच्च अदालत गएमा त्यहाँबाट आउने फैसला, नेकपाले दिने जिम्मेवारीका साथै उनकै नैतिक निर्णयको कडीमा अडिएको छ।
कुलमान घिसिङलाई विद्युत प्राधिकरणमा ल्याउने देउवाको तयारी
ओलीको मागबमोजिम सर्वोच्चले दियो यस्तो आदेश